အချို့ကြက်မွေးမြူသူများသည်ကြက်များကိုပြောင်းကဲ့သို့သောစပါးစေ့များဖြင့်ကျွေးလေ့ရှိသည်, Millet, ငရုတ်သီးစိမ်း, စသည်တို့. ၎င်းသည်အစာအသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရုံသာမကကြက်များကိုပါထိခိုက်စေသည်။ ၎င်းသည်အစာပိုမိုစားသုံးစေနိုင်သည်။, ပိုက်ဆံချွေတာပေမယ့်အစာကျွေးခြင်းအသုံးအနှုန်းနိမ့်သည်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြက်တွေဟာသွားမဝါးဘူး၊, ၎င်း၏တိုတောင်းသော intestine.Chickens နှင့်အတူ၎င်း၏အစားအစာကိုခဏတာကာလအတွင်းအူထဲမှာနေပါလိမ့်မယ်4နာရီ, ဒါဟာအပြည့်အဝအစာကြေနှင့်စုပ်ယူရန်ခဲယဉ်းသည်,ဤမျှလောက်များစွာသောအစားအစာစွန့်ပစ်. ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြက်တွေဟာဆန်ကုန်ကြမ်းတစ်မျိုးမျိုးကိုရိုးရိုးလေးကျွေးလို့ပဲ, သူတို့ရဲ့မျိုးကွဲ monotonous ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏အာဟာရမပြည့်စုံပါ. ရေရှည်အစာကျွေးခြင်းသည်ကြက်များ၏ကြီးထွားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ကြက်များကိုအသားစိမ်းများဖြင့်ကျွေးမွေးခြင်းသည်အစာကြေအဆင့်နိမ့်ကျခြင်းနှင့်မပြည့်စုံသောအာဟာရဓာတ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။, ရလဒ်အနေဖြင့်ကလေးငယ်များတိုးပွားလာသည်,ပွဲစားများနှေးကွေးတိုးတက်မှုနှုန်း,ကြက်ဥထုတ်လုပ်မှုနည်းသည်, နှင့်စီးပွားရေးထိရောက်မှုနိမ့်ကျ. အစာကျွေးခြင်းနည်းလမ်းမှာပြောင်းကဲ့သို့သောစပါးစေ့များကိုကြိတ်ရန်ဖြစ်သည်,ဂျုံအမှုန့်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောဖွဲနုကဲ့သို့သောအခြားပစ္စည်းများပုံဖော်, bean ကိတ်မုန့်, ငါးမုန့်ညက်, အရိုးမုန့်ညက်, ကျောက်စာ, pellet မှစသည်တို့ကို, ထို့နောက်ကြက်ကိုအစာကျွေးပါ.
နို့တိုက်ကျွေးသောကလေးငယ်များသည်စွမ်းအင်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပရိုတင်းဓာတ်လိုအပ်သည်. ယေဘုယျရိက္ခာ၌တည်၏, ဘောဇဉ် (ပြောင်းဖူး, ကျိုးတဲ့ဆန်, စသည်တို့) bran, 50-60% ဖြစ်ပါတယ် (ဆန်ဖွဲ, ဂျုံဖွဲ, စသည်တို့) ဟုတ်တယ် 5-10%; ရေနံကိတ်မုန့် (မြေပဲကိတ်မုန့်, bean ကိတ်မုန့်, နှမ်းကိတ်မုန့်, စသည်တို့) ဖြစ်ကြသည် 20-25%; တိရိစ္ဆာန်အစာကျွေး (ငါးမုန့်ညက်, အသားမုန့်ညက်, စသည်တို့) ဟုတ်တယ် 7-20%; အရိုးမုန့်ညက်, အခွံအမှုန့် 4-5%; စားပွဲတင်ဆား 0.3-0.5%. အစိမ်းရောင်အစာအပြင်ထပ်ကျွေးသည်, အထူးသဖြင့်ဗီတာမင်ဓာတ်မရှိပါ, အစိမ်းရောင်အစာကျွေးကိုချွတ်ကျွေးမွေးမရနိုင်ပါ, နှင့်အစာပမာဏကိုအကြောင်းကိုပါ 30-50% အဆိုပါအာရုံကျွေးမွေး၏.
တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ထိုဥများကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ကြက်ဥများသည်ပရိုတိန်းနှင့်သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးစီလိုအပ်သည်. သူတို့ကသိုက်၏လမ်းအများကြီးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး. တစ် ဦး shell ကိုစေရန်, သူမပထမ ဦး ဆုံးအစာကျွေးခြင်းမှကယ်လ်ဆီယမ်ကိုသောက်သုံးရပါမယ်, သူမ၏အရိုးစုထဲမှာအပ်, အဲဒီအရိုးတွေကနေထုတ်ယူပါ။ ကြက်ဥအဖြူဟာသန့်ရှင်းတဲ့ပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သူမပရိုတင်းကိုကြက်ဥပုံစံနဲ့ထုတ်ထုတ်ပြီးပုံမှန်စားဖို့လိုတယ်.
broilers ၏ပုံမှန်တိုးတက်မှုနှုန်းမြှင့်တင်ရန်အတွက်, ရောဂါကာကွယ်တားဆီး, အထွက်နှုန်းနှင့်စီးပွားရေးထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်,အစာတောင့်သည်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များထည့်သင့်သည်, ဗီတာမင်, သဲလွန်စဒြပ်စင်, ပိဇီဝဆေး, ဓာတ်တိုး, မှို, သားရေမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုတိုးတက်စေရန်အင်ဇိုင်းနှင့်အရောင်အသွေးစုံစေခြင်း။ အစာများကိုအရောအနှောရော။ ရောနှောရမည်။ ဖြည့်စွက်အမျိုးအစားနှင့်ပမာဏကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဆုံးဖြတ်သင့်သည်။, အများဆုံးအစာကျွေးခြင်းအစားအစာအဖြစ်, ဗီတာမင်များနှင့်သဲလွန်စဒြပ်စင်မပြည့်စုံဖြစ်ကြသည်, သင့်လျော်သောဗီတာမင်အမျိုးမျိုးနှင့်သဲလွန်စဒြပ်စင်အပိုဆောင်း၏သင့်လျော်သောအချိုးအစားကိုထည့်သွင်းဖို့အာရုံစူးစိုက်သင့်ပါတယ်, နွေရာသီတွင်မိုးရွာသောအခါများ၌ anti-mild agent နှင့် antioxidants များထည့်လေ့ရှိသည်.